Ọkachamara Semalt Na-enye Nkuzi N'uba N'uba
Ndị na-ere ahịa chọrọ ịma na ịmepụta saịtị ha maka engines ọchụchọ na-akpata 25% nke ihe niile SEO. Isiokwu na-esonụ bụ nke dị mfe, na nhazi nkuzi kachasị na saịtị. Ọ ga-abụrụ onye ọ bụla dị ọhụrụ nye SEO, ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ ime ihe kachasị mma na njikarịcha saịtị ha.
Nduzi a, nke Michael Brown nyere, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Ọkachamara , nwere ihe ndị na - esonụ:
Otu n'ime àgwà kacha ochie nke mkpokọta bụ aha njirimara. Ọ na-enye aka mee ka nhazi ihuenyo dị mfe. Kemgbe ndị mmadụ mepere emepe, mkpado aha na-aba uru. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka njikarịcha - mobile phone app developer.
Maka SEO ọ bụla na-agba ọsọ, ọ ga-abụrịrị ihe akaebe nke iji ojiji okwu. Keywords bụ isi nkuku nke dum SEO mkpọsa . SEO obula nke na-agunyeghi mkpuru okwu n'idi ya enweghi ntutu siri ike ma ghara ime ka onodu ahia di n'igwe. Otu n'ime ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi mụta otú e si eme ka njirimara site na ebe nrụọrụ weebụ dị na ya bụ ịghọta ihe njedebe dị na nchịkọta okwu bụ, na ihe ọ bụ banyere ya.
Okwu Prominence, Frequency, Idi nso
Keywords na-agụnye otutu ụzọ mgbe ọ na-abịa njikarịcha. E nwere ihe ndị ọzọ na-enwe mmetụta na njirimara na saịtị..Onye aghagh ighota amara, ugboro, na idi nso. Site na echiche ndị a niile, onye nwe ụlọ ọrụ nwere ike ịkụnye ike na ịdebe isiokwu n'ime ọdịnaya ha bipụtara.
Otu n'ime ụzọ ndị ọdịnaya na saịtị ahụ nwere ike isi nweta ọtụtụ okporo ụzọ bụ ịnweta isi mmalite ndị na-ejikọta na saịtị ahụ. A na-akpọ njikọ ndị a outbound. Onye nwe ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta njikọ sitere na isi mmalite ndị a ma ama. Ịntanetị jupụtara na njikọ na mgbe ọ bụla otu clicks na njikọ, enwere ihe dị elu ọ na-enyefe na ibe ọzọ. Na SEO, otu ụzọ isi ghọta otú e si aga n'ihu na nyocha SEO bụ ịmara otu esi enweta ma jikwaa njikọ njikọ ndị ọzọ. Isi ihe ọzọ dị mkpa iji rịba ama bụ iji ojiji zoro ezo na njikọ ndị e nyere.
Site na ịmara njikọ njikọ ndị ọzọ, ihe ọzọ iji mụta banyere bụ iji onyinyo SEO. O nwere ike inyere onye nwe ya aka nke ukwuu ebe ọ bụ na ihe oyiyi na-ekwupụta ọtụtụ ihe ọmụma dị mgbagwoju anya na onye ọhụrụ na SEO nwere ike ịghọta. Ihe nkuzi na-agụnye nduzi maka otu ndị nwe ụlọ ọrụ nwere ike isi welie saịtị ha maka ihe oyiyi. Foto enyemaka na SEO mgbe ha nwere Alt Text gụnyere nkọwa ha. Ọzọkwa, mmadụ nwere ike ịmebanye aha aha oyiyi iji tinye isiokwu. Ihe nkuzi ahụ na-akọwa na agbanwe faịlụ ahụ na-emetụta SEO.
Sitemaps enyemaka na crawling nke website usoro. N'ụzọ dị otú a, engines na ndị ahịa na-achọta ọ dị mfe ịnyagharịa ebe nrụọrụ weebụ. Nzọụkwụ saịtị na saịtị ahụ bụ otu ụzọ iji bulie ntọala SEO iji welie ahụmahụ ndị ọrụ nakwa dịka algorithms nyocha.
URL slugs na-ezo aka na adreesị kpọmkwem nke ebe nrụọrụ weebụ onye na-agagharị ugbu a. Ha na-anọchi anya ebe ibe weebụ dị na ajụjụ. Mgbe otu ụdị URL na ebe nkesa, URL slugs chọpụta otú onye ọrụ si enweta ibe weebụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ịme maka njikarịcha na saịtị.
Njikọ njikọ n'ime ụlọ
Njikọ dị n'ime ya bụ ihe niile iji jide n'aka na ejikọtara ibe niile na saịtị. Ọ bụ karịa igodo na nkwanye.